ကြှနျတေျာ့ဇနီးခရီးထွက်မဟုတ်သလိုစတိုး | Apg29
Aftonbladet စာတန်းများချိတ်ဆွဲထားသည်စက်တင်ဘာလ 28, 1994 ခုနှစ်။
ယနေ့တွင်စတိုးနီးယားဘောလ်တစ်ပင်လယ်အောက်မှာသွား၏သင်္ဘော၏ 25 နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ငါချစ်ရာသခင်စာအုပ်အဆိုပါအရှည်ဆုံးညဉ့်အံ့သြစရာအခနျးကွီးထံမှသင်တို့နှင့်အတူအတိုးနီးယားဘေးအန္တရာယ်များ၏ငါ့ကိုယ်ပိုင်သက်သေခံချက်ကိုမျှဝေချင်ပါတယ်။
ယနေ့တွင်ဒါကြောင့်စတိုးနီးယားနစ်မြုပ်ပြီးကတည်းက 25 နှစ်ဖြစ်ပြီး, 852 လူတို့သည်မိမိတို့ဘဝများဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သာ 137 လူတွေအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါခရီးသည်တင်သင်္ဘော M / S ကိုစတိုးနီးယားစတော့ဟုမ်းမှတဲလင်းမြို့ကနေသူ့ရဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းဘောလ်တစ်ပင်လယ်တွင်စက်တင်ဘာလ 28, 1994 ခုနှစ်အောက်မှာသွား၏။
852 သေဆုံးဘယ်သူကို၏ဘုတ်အဖွဲ့တွင် 989 လူများ, ရှိခဲ့သည်။ ဤအရာကား, 501 ဆွီဒင်နိုင်ငံသားများ။ 51 ဆွီဒင်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ အားလုံးအဖြစ် 137 လူတွေအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
အက်စ်တိုးနီးယားဘေးအန္တရာယ် Nordic ရေထဲမှာအစဉ်အဆက်ကိုစစ်အေးကာလအတွင်းအကြီးဆုံးသင်္ဘောပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ humanly နှောင်းပိုင်း 1900 အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင့်လည်းအသေအပျောက်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
စာအုပ် Christer Åberg၏အရှည်ဆုံးညဥ့်ကနေ။
ဒါဟာ Tranas အတွက်အလွန်အရေးပါအစည်းအဝေးဖြစ်ပျက်မတဦးတည်းအရာရာအရပျယူနိုငျသညျ, ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာကြီး, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘဲ။ အစဉ်အမြဲငါမှတဆင့်ပါပြီအဖြစ်နှင့်ဤသည်လည်းဘုရားသခင့ဆောင်၏အရှိဆုံးစပ်စုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လေပြီးနောက်, ငါအကြာတွင်နှစ်ခုကမျြးစာကိုကျောင်းများတွင်သွားလေ၏။ ဒုတိယသမ်မာကမျြးကျောင်းကိုJönköping Pentecostal ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း၌ရှိ၏။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. Pentecostal သမ်မာကမျြးကောလိပ်နှင့်သင်းအုပ်ဆရာ Leif Svensson ကျောင်းရဲ့ဦးခေါင်းကိုဆရာမကြီးတိုတောင်းခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါကျောင်းသည်ကယ့်ကိုကောလိပ်Viebäcksနှင့်တစ်နှစ်ကြာမြင့်ပိုင်။ ဒါဟာငါ့အဘို့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။
ငါကြီးမြတ်ယုံကြည်မှု Leif Svensson ခဲ့ကတည်းကကျောင်းကငါ့အဘို့အဆုံးသတ်ပြီးနောက်သူ့ကိုငါနှင့်အတူထိတွေ့ထားရှိမည်။ ယခုတွင်ငါသည်ပြီးတော့သူ့ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ တဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောအခါသမယတွင်သူသည်ယခင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံခဲ့ခြင်းနှင့်ယေရှုအကြောင်းတရားကိုဟောပြောခဲ့ကြကြောင်း Leif သို့ပြောသည်။ လူအတော်များများသညျယရှေုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်းနှင့်အစည်းအဝေးများ၌ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ကြသည်, ဒါလုံးဝစိတ်ကူးကြပြီ။
ငါ့နှလုံး၏ဖနောင့်။ ငါသည်ငါ၏စိတ်တွင်ကအော်ဟစ်နှင့်အတူဖြစ်ချင်တယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်ဆိုဗီယက်ယူနီယံမှသွားလာရန်အချိန်ရှိသည်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စကားဝိုင်းကိုအလွန်ကြီးမားသောအင်ပါယာဖျက်သိမ်းပြီးနောက်တချို့ကအချိန်။
ငါအကြာတွင် Leif ကိုခေါ်တော်မူသောအခါ, သူတို့လတ်ဗီးယားရဲ့မြို့တော်ရက်မှာအတွက်ယခင်ကွန်မြူနစ်နန်းတော်၌ကြီးမားသောခရစ်ယာန်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးရှိသည်မယ်လို့ပြောတယ်။ ငါ join ချင်တယ်ဆိုရင်သူကမေးနဲ့ကျွန်မသင်တန်း၏, ချင်တယ်။ ဒါဟာနောက်တဖန်လုံးဝစိတ်ကူးခဲ့: လူအတော်များများသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နှင့်သဘာဝလွန်အမျိုးမျိုးသောရောဂါများ sJags ၏အနာကိုငြိမ်းစေခဲ့သည်။
ဒါဟာအစနောက်ပိုင်းမှာရီဂါတစ်စက္ကန့်ခရီးစဉ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ကြီးမားတဲ့အားကစားခန်းမ၌ဤအချိန်အစည်းအဝေးများ။ နှစ်ဦးစလုံးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများ, ငါ၏စိတ်တွင်နက်ရှိုင်းသောအထင်အမြင် left ငါအနာဂတ်တွင်ပိုမိုထိုကဲ့သို့သောအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ရပ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းကိုချင်တယ်။
Ljungby အတွက် Pentecostal ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းပေါင်းများစွာတိုက်ခန်းများငှားနဲ့ကျွန်မအခုထိပ်မှာလဲလျောင်းတှငျနထေိုငျတဲ့အချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့တဦးတည်း, တစ်ဦး sloping မျက်နှာကျက်နှင့်လသာပေါက်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူတစ်ထပ်ခိုးခဲ့သည်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့အခန်းတစ်ခန်းနှင့်တစ်ဦးကိုအလွန်ရှည်မျောမျောမီးဖိုချောင်နှင့်ပိုပြီးသေးငယ်တဲ့အခန်းတစ်ခန်းနဲ့တူအမှန်တကယ်ခဲ့သည့် alcove ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါပင်သေးငယ်တဲ့လသာဆောင်ခဲ့သည့်တိုက်ခန်းအတွက်ကောင်းစွာအရှင်ပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ ငါလသာဆောင်ပေါ်မှာမတ်တပ်ရပ်လိုက်တဲ့အခါကျွန်မအနီးအနားခဲ့သောဘူတာရုံ၏ကောင်းတစ်ဦးအမြင်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ငါသည်ငါ့အနီရောင်ပတ်ဖုန်းကိုရှိခဲ့တယ်ရှိရာကြီးမားသော oblong မီးဖိုချောင်ထဲမှာငါတနေ့ Leif Svensson တက်ကိုခေါ်။ (ဤသည်ကော့ဒလက်ဖုန်းများနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများ '' အချိန်မတိုင်မီဖြစ်ခဲ့သည်။ ) ငါ့အား Leif Svensson ပြောပြတဲ့အခါ:
"ကျနော်တို့စတိုးနီးယား၏မြို့တော်၌ကြီးစွာသောမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးရှိခြင်းပါပဲ။ ကျနော်တို့စတော့ဟုမ်းကနေကြီးမားတဲ့ခရီးသည်တင်သင်္ဘောနှင့်အတူရှိသွားလိမ့်မည်။ "
ငါ့နှလုံးမှပြန်ဖနောင့်။ ငါတကယ်တလျှောက်လာချင်ပါတယ်။ ငါအရင်နှစ်ခုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးခဲ့မိသောကြောင့်ကြောင့်ပါလိမ့်မယ်ပုံကိုအံ့သြဖွယ်သိတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာပိုက်ဆံဖြစ်ပါတယ်စာလုံးပေါင်း။
"ငါတကယ်တလျှောက်လာချင်ပါတယ်," ငါအနည်းငယ်ဝမ်းနည်းစွာနှင့် resignedly, Leif မှပြောခဲ့သည်။ "ဒါပေမဲ့ကျွန်မခရီးစဉ်မတတ်နိုင်လို့မရပါဘူး။ ငါရိုးရှင်းစွာအဘယ်သူမျှမကငွေရှိသည်။ "
ငါသည်ဤအချိန်တွင်ခဲ့ကတည်းကငါမာဂျင်ပေါ်နေထိုင်နေခဲ့ပါသည်, အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအပိုတစ်ခုခုလုပ်ကြဘယ်တော့မှနိုင်ဘူး။ ငါအလုပ်လက်မဲ့အာမခံကနေပိုက်ဆံလက်ခံရရှိနှင့်သာလိုအပ်သောနိမ့်ဆုံးရန်လုံလောက်ခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းခြောက်ပတ်အတွင်းငါအချို့အကြောင်းပြချက်, အနည်းငယ်ပိုငွေ, သို့သော်, ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာငါတကယ်နိုငျအောငျဘယ်တော့မှသော countervailing အချက်, ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Leif ငါမတတ်နိုင်ကြောင်းကြားပြောလေ၏သောအခါသူနေဆဲကျန်းမာယုံကြည်သည်ဟုဆိုသည်
"မပြဿနာရှိပါသည်။ ကျနော်တို့ကစီစဉ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ကခရီးစဉ်ကိုဘယ်လောက်စျေးသက်သာရနှင့်အခြားသူများကမသိရပါဘူး။ "
ဒါဟာ "သာမန်လူတွေက" အတိုင်းလိုက်နာနိုင်ကြောင့်ဤခရီးစဉ်၏ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့လက်မှတ်တွေသူတို့ကိုယ်သူတို့ paid, ဒါကြောင့်သူတို့အစည်းအဝေးတွေမှာအမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေနဲ့ကူညီနိုင်ခဲ့တယ်။ သူတို့ဟာနှင့်တကွဖြစ်လူတို့အဘို့ဆုတောင်းပဌနာ, မကြာခဏရာပေါင်းများစွာအတွက်တခြားသူတွေတို့, တက် လာ. နှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်လိုသူ။ ဤအသာမန်ဆွီဒင်နိုင်ငံသားများသည်လည်းနေမကောင်းဖြစ်နှင့်သောလူတို့အဘို့ဆုတောင်းပဌနာတဲ့အခါသူတို့အနာကိုငြိမ်းစေခဲ့သည်။ ဤအရာသည်အလွန်ယုံကြည်ခြင်းအဆောက်အဦးဖြစ်ခဲ့သည်: တစ်ခုမှာယရှေုသညျအံ့ဘွယ်သောအမှုနှင့်အံ့ဖွယ်အလုပ်ခဲ့တယ်သည့်အခါအဖြစ်မှန်အတွက်ဖြစ်ဖို့အခြားစကားရတယ်: ဒါ့အပြင်အခု Leif ရဲ့ကမျြးစာကိုအတန်းအစားကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့သိရကြ၏။ ဤနည်းအားဖြင့်သူတို့ကမျြးစာကိုကျောင်းတွင်လေ့လာသင်ယူခဲ့ရာလေ့ကျင့်ဖို့ထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းရခဲ့တယ်။ သူတို့ကယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့အလုပ်လုပ်ခဲ့သိမြင်ဖို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မျက်စိနဲ့လို။
Leif Svensson ငါကိုလိုက်နာနိုင်အောင်, ထိုခရီးစဉ်များအတွက်ကောင်းသောကြော်ငြာစေရန်အမှန်တကယ်ကြိုးပမ်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူကဘယ်လောက်ကောင်းမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလိမ့်မယ်နှင့်မည်သို့အံ့သြဖွယ်တစ်ခုကိုစတော့ဟုမ်းကနေတဲလင်းမြို့ကမှအနုပညာခရီးသည်ကူးတို့၏ပြည်နယ်သွားရောက်ပါလိမ့်မယ်ပြောတယ်။ ကျနော်တို့သင်္ဘောပေါ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် cabin ထဲမှာနေဖို့မယ်လို့ငါအဲဒီမှာယခု ပို. ပို. တောငျ့။ ကျနော်တို့ကစကားပြောဆိုမှုအဆုံးသတ်ခင်မှာ Leif သူကင်ပိန်းနှင့်မေးလ်အားဖြင့်ဇိမ်ခံနှင့်ပြည်နယ်ခရီးသည်နှင့်ပတ်သက်ပြီးလည်းကောင်းတဲ့လက်ကမ်းစာစောင်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးပို့မယ်လို့ကတိပေးခဲ့တယ်။ ရက်အနည်းငယ်ကစကားဝိုင်းအပြီးငါကငါ့အတံခါးကိုအတွက်မေးလ် slot ကသို့ဆောဘယ်လိုငါ၏အကြီးမားဧည့်ခန်းထဲကနေကျွန်တော်ကြားလျှင်, တစ်ခုခု၏သံတွေခန်းမကြမ်းပြင်ပေါ်မှာဆင်းသက်ခဲ့သည်။ ငါကရောက်ရှိလာခဲ့သောပို့စ်ခဲ့လျှင်ကြည့်ဖို့စင်ကြယ်သောတံခါးမှီတိုင်အောင်ငါ့ကိုယ်ပိုင်? Ket အဘိဓါန်ဟုန်တည်းပြေး။ ဟုတ်ပါတယ်, အဲဒီမှာက doormat အပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါစတိုးနီးယားခရီးအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူစာတစ်စောင်ရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုတွေ့မြင်ချင်တယ်။ အားလုံးကတခြားမေးလ်အက္ခရာများ, မဂ္ဂဇင်းနဲ့ကြော်ငြာကအရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒီအချိန်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ကျွန်ုပ်မွေ့လျော်ရာမှငါပေးပို့သူအဖြစ် Leif Svensson နှင့်အတူကြီးမားတဲ့အညိုရောင်စာအိတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မချက်ချင်း, အရံဖန်ရံခါစာတစ်စောင်ဓါးသကဲ့သို့ငါ၏လက်ညှိုးနှင့်အတူအညိုရောင်စာအိတ်ဝမ်းခွဲရဲ့ contents ဆွဲထုတ်ကြောင့် Leif ငါ့ထံသို့စေလွှတ်ခဲ့ကြောင်းအက်စ်တိုးနီးယားခရီးအကြောင်းကိုနည်းနည်း amateurish လုပ်သတင်းအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ့မျက်စိစတိုးနီးယားဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုယူမယ်လို့ကြီးမားသောဇိမ်ခံခရီးသည်တင်ကူးတို့အကြောင်းကိုလက်ကမ်းစာစောင်ကြိုဆို, လှပဖို့လည်းမကြာမီရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
ငါ dreamy ကြည့်နှင့်အတူကြီးမြတ်သင်္ဘောလေ့လာခဲ့သည်။ အဆိုပါကဒ်ကိုအထက်မှထောင့်ဖြတ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာနောက်ကွယ်ကရှည်လျားအဖြူရောင်နှင့်အတူအပြာရောင်ပင်လယ်အပေါ်ခရီးသွားလာခဲ့ပါတယ်ရှိရာသင်္ဘောဝေးနှင့်ကျယ်ပြန့်ခဲ့သည်။ ငါနှင့်အတူလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်အရာကို။ ကနည်းလမ်းများစွာရှိပါလိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးစွန့်စားမှု။
ဟုတ်ပါတယ်, ငါတကယ်ကိုလိုက်နာလိုသော်လည်းငါ့စိတ်ထဲအတွက်နာင့်ငါသည်ကိုယ်၌တွေ့စီးပွားရေးအခြေအနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးသောအခါ။ ငါသည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်း ဘုရားသခင်အားဆုတောင်းပါ: ငါဒုက္ခသို့မဟုတ်လိုအပ်ဘာမှသို့ပွေးလေ၏သည့်အခါကောင်းပြီ, ဖြစ်ကောင်းဘယ်အရာကိုအစဉ်မပြတ်ငါလုပ်ပေးလေ့ရှိတယ်။ ငါသည်ငါ့ alcove ခဲ့သည့်အခန်းငယ်လေးထဲမှာအိပ်ရာခွငျးအားဖွငျ့အကြှနျုပျဒူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငုံ့နှငျ့ယရှေု '' နာမ၌ဘုရားသခင်အားဆုတောင်းလေ၏။ ငါခရီးအတွက်လိုအပ်သောငွေကိုပေးစေခြင်းငှါသူ့ကိုမေးတယ်။ တဖန်သင်တို့ပြုသောပဌနာအဖြေများကိုရရန်ဘုရားသခင်အားဆုတောင်းပဌနာသည့်အခါ - တလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်အခြား၌တည်၏။
ငါသည်လည်းငါ၏အဆွေရှိနသောသူတစ်ဦးအဟောင်းများကိုခရစ်ယာန်စုံတွဲခံစားရတယ်။ ၎င်းတို့၏အမည်များကိုရုသနဲ့ Berndt ခဲ့ကြသည်နှင့်ဗဟို Ljungby အတွက်လူသိများတဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲစတိုးဆိုင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ပြီးတော့သူတို့ကိုငါသွားရောက်လည်ပတ်လေ့ရှိတယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါသူတို့ကိုကြိုဆိုသလိုခံစားရတယ်။ ငါသည်သူတို့၏တံခါးနားမှာခေါ်သောအခါဘယ်တော့မှအစဉ်အဆက်ငါလာရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ထိုသို့အတော်လေးမကြာခဏဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
သူတို့ကပဲဗဟိုအထက်ကုန်းပေါ်မှာသော, ရေမျှော်စင်အနီးနေထိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့အညိုရောင်အုတ်အိမျထလမ်းလျှောက်ဖို့အကြောင်းကိုနှစ်ဆယ်မိနစ်ကိုယူ။ ငါသွားရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကကြီးမားလှပသောဧည့်ခန်းထဲမှာအညိုဆိုဖာ၌ထိုင်နေစဉ်ကဤအဆွေခင်ပွန်းတို့သည်ငါ့ကိုအမြဲကော်ဖီနှင့် cookies များကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့မကြာခဏအတူတကွခရစ်ယာန်ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုလိမ့်မယ်။ သငျသညျရုပ်မြင်သံကြားပေါ် Pre-မှတ်တမ်းတင်ထားသောရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုလိုကျသောအခါဤအချိန်တွင်ပြုလုပ်ဆဲ VCR ကိုယူ။ ရုသနဲ့ Berndt ကယ့်ကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့်အစည်းအဝေးများကနေခရစ်ယာန်ရုပ်ရှင်နှင့်အတူကောငျးအလှနျခဲ့သည်။ အဆိုပါဇာတ်ကားဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ခဲ့ကြသည်သူတို့ကျော်ကြားစပီကာနှင့်အတူရှိခဲ့သည်။ သငျသညျရှိတယ်တဲ့အခါမှာဒါဟာထို့နောက်နှစ်ဦးစလုံးဝိညာဉ်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းမှကိုယ်ထင်ရှားတယ်။ ကျနော်တို့ယေရှုအကြောင်းသင်တန်း၏ပြောဆိုသောနှင့်ဆွီဒင်အတွက်ဝိညာဉ်ရေးရာအခြေအနေအကြောင်း။
ရုသနဲ့ Berndt အမြဲလမ်းကိုပြောပြခြင်းနှင့်အထူးကြပ်မတ်ဖို့အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်လည်းနှလုံးတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့တွေ့သောအခါသူကမကြာခဏနှောင်းပိုင်းတွင်ပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်သုံးခုအချိန်ခြေရာခံဆုံးရှုံးဖို့လေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်မအိမ်ကလမ်းလျှောက်ရှေ့မှာမကြာခဏညဥ့်ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းအံ့ဩစရာမရှိဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကိုငါလည်ပတ်ခဲ့သည့်အခါအစဉ်မပြတ်ငါရှည်လျားညအဘို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ညနေကရုသနဲ့ Berndt ရန်နောက်ထပ်ခရီးစဉ်အတွက်အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါရထားဘူတာရုံကိုကူး, ပဲန်တီကော့စအသင်းတော်၌ငါ၏အတိုက်ခန်းထဲကလမ်းလျှောက်သည့်စတုရန်းဖြတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ထို့နောက်ရှည်လျားသောတောင်ကုန်းကိုတက် trudged ။ ငါသည်သူတို့၏အိမျဦးဆောင်သောအခြမ်းလမ်းပေါ်သို့ရေမျှော်စင်ကနေနေသားတကျလှည့်တောင်ထိပ်တွင်, ရေတိုသောကျောက်ခြေလှမ်းများတက်သွားလေ၏နှင့်ခေါင်းလောင်းမြည်။
ရုံတံခါးကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပုံမှန်အတိုင်းကြိုဆိုထားသကဲ့သို့ငါ့ကိုနှုတ်ဆက်သည်။ အမြဲသကဲ့သို့ငါနွေးနွေးထွေးထွေးငါ၏အဆွေအားဖြင့်လက်ခံရရှိဤအချိန်ခံစားရတယ်။ ဒါဟာသူတို့နှင့်အတူဖြစ်ဒါကြောင့်ကောင်းသောခံစားရတယ်။ ငါသည်ဤအချိန်တွင်တစ်ဦးတည်းပဲကတည်းကငါ့ကိုပေါင်းသင်းသွားလာခြင်းမှဒဏ်ငွေခရစ်ယာန်မိတ်ဆွေများကိုရှိသည်ဖို့အတှကျ, ကပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်တို့သည်အဆင်းဧည့်ခန်းကို TV ဆိုဖာများတွင်ပုံမှန်ထက်အဖြစ်, ထိုင်လျက် chatting စတင်ခဲ့ပြီး, ရုပ်ရှင်များကြည့်စကားပြော, ကော်ဖီလည်းသောက်, ရုပ်ရှင်တွေ watched ပြောဆိုသော ... တိုတိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်းကျနော်တို့တွေ့သောအခါပြုပါရန်အသုံးပြုဘာနှင့်နာရီခါတိုင်းလိုအဖြစ်ပျံသန်း ကွာ။
"Jönköping, Leif Svensson အတွက်သမ္မာကျမ်းစာကျောင်းပင်တေကုတ္တေမှာအကြှနျုပျ၏ဟောင်းတဦးကမျြးစာကဆရာ, အရှေ့ဥရောပအတွက်အသစ်တခုမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစေမည်" ငါရုသနဲ့ Berndt သို့ပြောသည်။
သူကကော်ဖီ၏သေးငယ်တဲ့ငုံသောက်နှင့်ကိတ်မုန့်ကိုတက်ဝါးစဉ် "ကိုထပ်လတ်ဗီးယားသည်?" Berndt မေး။
သူကအထူးသဖြင့်အရှေ့ဥရောပ, အခြားနိုင်ငံများတွင်တရားဟောကွား၌ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားကြောင့်သူချက်ချင်းစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ အဆိုပါဗီဒီယိုအား၎င်းတို့၏ရုပ်မြင်သံကြားဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ flickered, ဒါပေမယ့်အခုကကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သူအားမျှကစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသည်ရုတ်တရက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ လာမည့်ခရီးစဉ်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြသည်, ဒါကြောင့်ပင်ငါ၏အဆွေ '' နားရွက်ဖမ်းမိခဲ့သည်။ သူတို့ကငါအတိတ်အတွက်ခရီးစဉ်များ၏ဤအမျိုးမျိုးပြုသမျှကိုသိကွ၏ခရီးစဉ်ငါ့ကိုဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့မည်မျှသိသည်။
"အဘယ်သူမျှမ, စတိုးနီးယားမှာရှိတဲ့တဲလင်းမြို့က" ငါသည် Smitty ရဲ့မေးခှနျးကိုမှာပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ "ဒါဟာအကြီးပြန်လည်ရှင်သန်မှုအတွက်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကဲ့သို့တူညီသောလမ်းအတွက်ငါရီဂါတွင်ရောက်ခဲ့ဖူးသော anion ရုန်းကန်ရလိမ့်မည်။ "
"ဘာပျော်စရာ" ဟုသူမကငါ့အချည်းနှီးသောဖလား၌အချို့သောပိုပြီးကော်ဖီသွန်းလောင်းစဉ်အတွက်ရုသသည်တဲဘ်တပ်ထား။ "သင်လာတော်မူမည်လော" သူမဟာကျနော်အသစ်သွန်းလောင်းကော်ဖီအဘို့အပင်ကိတ်မုန့်ကိုယူမယ်လို့ငါ့ထံသို့ကိတ်မုန့်ပန်းကန်သည်အထိတစ်ချိန်တည်းမှာကိုင်ပြီး, မေးတယ်။
"ငါတကယ်ကချင်ပါတယ်," ငါ "ဟုပေမယ့်သေးငယ်တဲ့ရိုက်သွားလည်းမရှိ။ ငါရိုးရှင်းစွာခရီးစဉ်များအတွက်ပိုက်ဆံမရှိပါဘူး, ဒါကြောင့်ငါမသွားမတတ်နိုင်လို့မရပါဘူး။ "
ငါတကယ်ငါနောက်ဆုံးကဖော်ပြခဲ့တဲ့သောအခါအသောကွောငျ့မထင်။ ဒါကစုံတွဲအမည်ရပိုက်ဆံများများရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ Ljungby အတွက်လူကြိုက်များနှင့်အလုပ်များစတိုးဆိုင်ကိုယူ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အရာအားလုံးအကြောင်းကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြောဆိုရန်အသုံးပြုဒါထို့ကြောင့်တကယ့်အဘယ်သူမျှမငါ့အစိတျအပိုငျးအပေါ်တောင်းစားခဲ့သည်။
ကျနော်တို့အရာရာအကြောင်းပြောဆိုဆက်လက်ပေမယ့်ခေါင်းလောင်းတကျိပ်နှစ်ပါးသောအတိတ်တစ်ဝက်ဖြစ်လာသောအခါ, ငါကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူထုအဆုံးသတ်ဖို့အချိန်ခဲ့တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားမိတယ်။ ကျနော်တို့နောက်ဆုံးတော့ခွဲရှေ့တော်၌ထိုစကားဝိုင်းကိုအိမ်ရှေ့တံခါးနားမှာခဏဆက်ပြောသည်။
ငါရှည်လျားသောတောင်ကုန်းဆင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ပုံမှန်အတိုင်းသည်မှောင်မိုက်၌ဗဟို၏အကြီးအအမြင်များရှိခဲ့ပါတယ်။ Streetlamps, အိမ်များနှင့်ဆိုင်များကိုလှလှပပပြန်မြို့တော်ရဲ့ရုပ်ရှင်ရုံများနှင့်ရထားဘူတာအကြားငါ့အတိုက်ခန်းဖို့လမ်းအပေါ်မှောင်မိုက်၌တက် lit ။
ကျနော်တို့ခွဲပြီးနောက်ထိုညဉ့်ငါတိုးနီးယားခရီးအကြောင်းကိုပြောပြသည်ခဲ့ရာအပေါ် Berndt ထင်ခဲ့တယ်။ ငါခရီးစဉ်အပေါ်ကိုသွားချင်ခဲ့တယ်, ဒါပေမယ့်ငါရှိသောကြောင့်ရန်ပုံငွေမရှိခြင်း၏အခွင့်အလမ်းရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ အကယ်.
"ခရစ်ခရီးစဉ်မတိုင်မီနောက်တဖန်ကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ဆက်လျှင်, ငါသူ့ကိုပိုက်ဆံပေးလိမ့်မယ်," Berndt ကိုယ်တော်တိုင်နှီးနှောလေ၏။
ဤရွေ့ကားအတှေးငါအကြောင်းကိုသင်တန်းဘယ်အရာကိုမျှသိသည်။ Berndt ငါခရီးစဉ်မတိုင်မီပြန်လာလျှင်သူသည်ငါ့ကိုလိုအပ်သောရန်ပုံငွေများကိုပေးစေခြင်းငှါသွားခဲ့တာနောက်ပိုင်းမှာပြောတယ်။ အမျိုးပျက်သောအရာငါမပြုခဲ့သညျ။
ဒါဟာသဘာဝလွန်နှငျ့ဘုရားသခငျရဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလမ်းညွှန်မှု၏သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါခရီးစဉ်များအတွက်ပိုက်ဆံတောင်းခဲ့ပေမယ့်ကျွန်မကိုလည်းဇနီးတောင်းခဲ့သည်။ ငါမကြာမီဆုတောင်းခြင်းအဖြေကိုရရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်မယ်လို့ဒါမှဘုရားသခငျသညျယခုအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
ဤအချိန်အားဖြင့်ငါအလုပ်လက်မဲ့ကြားပြောလေ၏။ တိုင်းခြောက်ပတ်အတွင်းငါအလုပ်လက်မဲ့အာမခံကနေအပိုပိုက်ဆံရဖို့သုံးခြင်းနှင့်ယခုနောက်တဖန်အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသူသည်ငါလုံးဝမေ့လျော့ခဲ့ကြပေမယ့်အလုပ်လက်မဲ့အာမခံကနေစာအိတ်ဖွင့်လှစ်အလျားလိုက်အပေါက်သည့်အခါငါသည်ငါ့လက်ညှိုးနှင့်အတူရယ်, ငါသည်သူတို့အပိုပိုက်ဆံအတွက်ဒီအချိန်ထားခဲ့ကြောင်းကိုမြင်တော်မူ၏။ ရုတ်တရက်ကျွန်မကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စတိုးနီးယားဖို့ခရီးစဉ်မတတ်နိုင်ခဲ့။
ဒါပေမယ့်တစ်ခုခုငါ့အစိတျထဲမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ အက်စ်တိုးနီးယားမှခရီးသွားစိတ်ဝင်စားမှုရှိမရှိတော့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဆိုင်းလင့်နေချိန်မှာဒါဟာတစ်နည်းနည်းနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ ဒါဟာတဲလင်းမြို့အတွက်စီစဉ်ထားကမ်ပိန်းအဘို့အကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးထဲမှာအလွန်တိတ်ဆိတ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါလုံးဝတိုးနီးယားမှသွားလာတော့ဘူးမျှအလိုဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။
ငါယခုအကောင့်အတွက်အပိုပိုက်ဆံခဲ့သည် Pentecostal ဘုရားကျောင်းငါ့ကို ယူ. ငါ့ကိုသညျယရှေုအနိုင်ရသူ, ငါ့မိတ်ဆွေတစ် Tomas သို့ပြောသည်။ သူကကျွန်မစတိုးနီးယားသွားရောက်ချင်ခဲ့တယ်ဘယ်လောက်သိတယ်, ဒါပေမယ့်စီးပွားရေးဘီးတစ်ဦးပြောသောထားသော။
"ဒါပေမယ့်ထို့နောက်သူကသင်သွားသင့်ကြောင်းဘုရားသခင်၏အလိုတော်င်!" ငါပိုက်ဆံ၏သတင်းကိုသူ့ကိုကိုပြောသည်သောအခါသူကောက်ကာငင်ကာကွှေးကျွောခဲ့။ ငါ grimly ကိုက်သည့်အခါငါ့အဖြေကိုမေ့လျော့ပေမယ့်ကြီးမြတ်ခံယူချက်နှင့်အတူ replied ဘယ်တော့မှ:
ငါတကယ်ငါကလည်းအဘယ်အရာကိုမသိခဲ့ပါ။ ဒါဟာငါ့နှုတ်နှင့်ငါ့နှုတ်ခမ်းများထဲကပဲတစ်နည်းနည်းနဲ့လာ၏။ ဤတွင်ကျွန်မရုန်းကန်နေနှင့်အက်စ်တိုးနီးယားမှသွားလာခွင့်ပြုဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ ငါနောက်ဆုံးတော့အခွင့်အလမ်းရခဲ့ပါတယ်အခါ, ငါကဘုရားအလိုတော်မဟုတ်ခဲ့ဟုဆိုသည်။
အခုတော့နောက်တဖန်ငါတကယ်ကပြောသည်သောသူသည်ငါ့ကိုမကြီးနားလည်ပါသည်။ ဒါဟာငါ့ကိုအမှီပြောပြီခဲ့သောဝိညာဉ်တော်သည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ : "ဝိညာဏ" သို့မဟုတ် cocky ပါစေခြင်းငှါမနိုင်ရန်အတွက်ငါဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်သို့သော်ကြောင့်အနည်းငယ်ဆင်း toned
ငါကဒါ cocksure ဖြစ်ဖို့ထက်နည်းနည်းပိုကောင်းတဲ့တံပိုးမှုတ်သောအခါစဉ်းစားမိတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီကိစ္စကိုအဆုံးကိုဆှေးနှေးခဲ့ကြေညာချက်အပြီး။ သောမတ်စ်ပိုပြီးအရာချီဘယ်တော့မှ - ငါဖြစ်စေမကျင့်။ တစ်ခုခုတဲလင်းမြို့အတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးနှင့် ပတ်သက်. အကြှနျုပျ၏စိတျထဲမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ငါ၏အလိုဆန္ဒလုံးဝလွခံခဲ့ရခြင်းနှင့်ငါတကယ်ကနားမလည်နိုင်ဘူး။
ငါဘယ်နေရာမှာသောအခြိနျကာလကိုခရီးထွက်ခြင်း, အစဉ်အမြဲငါကျေးဇူးတင်တယ်။ ယင်းနောက်ငါကလမ်းတစ်အံ့ဖွယ်လမ်းအတွက်ငါ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့တော်မူသောဘုရားသခင်၏ခဲ့ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်။
ငါ့ကိုထက်သာမယ့်လအနည်းငယ်အငယ် Linkoping အတွက်တစ်ဦးကမိန်းမငယ်သည်လည်းအတူတူပင်ခရီးစဉ်အပေါ်သွားကြဖို့စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ ဤမိန်းမသည်, ငါ့ကိုမတူဘဲခရစ်ယာန်တစ်ဦးမိသားစုထဲမှာကြီးပြင်းခဲ့လေသည်။ သူမသည်အရှင်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ပါသည်နှင့်ပြီးသားတစ်စီရင်စုနယ်အတွက်တစ်ဦးဧဝံဂေလိဆရာအဖြစ်လုပ်ကိုင်ဖို့စီမံခန့်ခွဲခဲ့ရတယ်။ နှစ်အနည်းငယ်အစောပိုင်းကသူမကသက်တမ်းတိုးဘို့သညျယရှေုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးယခုဘုရားသခင်အားတစ်ဦးတာဝန်ပေးအပ်ဘဝနထေိုငျခဲ့လေသည်။
အချိန်ကြာမြင့်စွာကစတိုးနီးယားလာရန်ဆိုလိုပေသည်အတိုင်းဤအံ့သြဖွယ်များနှင့်စွန့်စားခရီးကို join ဖို့သူမ၏သြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ကြိုးစားဘို့သူမ၏မိတ်ဆွေတချို့ကရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်သူမသည်ပြုပါလိမ့်မယ်ပုံကိုသေချာများအတွက်မသိခဲ့ပါ။ သူမနောက်ကိုလိုက်သို့မဟုတ်မမလား? သူမသည်Linköping၌မိမိတို့နှစ်ဦးကိုအခန်းတိုက်ခန်းအတွက်အိမ်မှာနှစ်ခုစိတ်ကိုတကယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
တစ်ဦးကအချိန်တိုအတွင်းအကြာမှာကျွန်မအလယ်ဗဟိုတွင်ဆင်းခဲ့နဲ့တစ်ဦးအမှုပြုတော်မူပြီ။ နေအိမ်လမ်းကိုကြောင်းညနေခင်းတွင်ငါနေတဲ့သတင်းစင်အတိတ်လမ်းလျှောက်ဒါကြောင့်လည်းသတိရပါ။ အထူးသဖြင့်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်တပါးအခြားသူများထံမှထွက်ကပ်ခဲ့ပါတယ်, ငါကသုံး၏အလယ်တွင်ခဲ့ထင်ပါတယ်။ ငါကို kiosk လွန်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းကအာရုံလိုက်ပါတယ်။ အဆိုပါခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ပါကကြီးမားသောအနက်ရောင်စာလုံးနှင့်အတူရှိ၏: "ကူးတို့ညဉ့်အခါဘောလ်တစ်ထဲမှာနစ်မြုပ် - သေလွန်သောသူတို့သည် 800 ကျော်"
ကြောက်မက်ဘွယ်သောနှင့်ထိတ်လန်löpsedelnနေသော်လည်း, ဒါကြောင့်ငါအနိုင်နိုင်ကမှတ်ချက်ချသည်။ ဖြစ်ကောင်းငါမှာအပေါင်းတို့သည်ငါ့ကိုတို့ထိ, ထိုသို့အစဉ်အမြဲ "ဒီမှာ" တစ်နေရာရာတခြားဖြစ်ပျက်နှင့်မမဟုတ်ခဲ့ယူဆလို့ပဲ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ငါကဆွီဒင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုထိခိုက်စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့အကြောင်း, မှားတဲ့စိတ်ကူးစိတ်ထင်, ဒါပေမဲ့တခြားလူမျိုးနှင့်တိုင်းပြည်များ။ ကလူကိုဘယ်လိုမကြာခဏလုပ်ပေးနဲ့ကျွန်မအဲဒီအခြိနျနည်းနည်းကွဲပြားခြားနားမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ယာဉ်မတော်တဆမှုများနှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပျက်သောအခါ, အမြဲကမ္ဘာပေါ်မှာတခြားသူတစ်ဦးဦးရဲ့။ ဒါဟာဆွီဒင်ဖြစ်ပျက်မပင်လျော့နည်းစိုးရိမ်ပူပန်ငါကဖြစ်၏။ ထူးဆန်းတဲ့အတွေး, ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့မနက်မှာကျွန်မတိတ်တဆိတ်ထိုင်လျက်နဲ့ကျွန်မ absentmindedly ရေဒီယိုသတင်းစာစောင်၏စကားကိုနားထောင်နေစဉ်ကျနော်ဆလာမီနဲ့ငါ့သီးနှံနှင့်သားညှပ်ပေါင်မုအတွက်ထားငါ့အမီးဖိုချောင်ထဲမှာမနက်စာကိုစားကြ၏။
ထိပ်တန်းသတင်းဘောလ်တစ်ပင်လယ်၌ကြီးစွာသောဘေးဥပဒ်ကိုအကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ ရုတ်တရက်ကျွန်မရှေ့တော်၌ထိုညဥ့်မြင်ဘူးlöpsedeln၏သတိပေးခံခဲ့ရသည်။ တစ်ဦးကကူးတို့နစ်မြုပ်ခဲ့ပြီး, ကျော် 800 ကလူကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ ငါကပိုဂရုတစိုက်နားမထောငျလာတယျ။ အဆိုပါသတင်းထောက်ကူးတို့ပင်လယ်လှိုင်းတံပိုးအောက်မှာသွားပြီးမှညဉ့်လယ်မှာစတိုးနီးယားကနေဆွီဒင်နိုင်ငံမှ၎င်း၏လမ်းပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အက်စ်တိုးနီးယား? ဒါပေမယ့်စတိုးနီးယားဖို့ပဲကျွန်မရဲ့ခရီးစဉ်အပေါ်ပြီမလဲ ထိုသို့ Leif Svensson ခရီးသွားလာနှင့်သူ၏မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးရှိခြင်းခဲ့ရှိ၏။ သူလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်စီစဉ်ပေးခဲ့သည်။ ထိုမှတပါး, အားလုံးနီးပါးကမျြးစာကိုကျောင်းကအတန်းအစားနှင့်အတူဖြစ်။
ငါ၏အကြံအစည်ထိပ်တန်းသတင်းသမုဒ္ဒရာကြမ်းပြင်မှနစ်မြုပ်သောကူးတို့၏နာမကိုထပ်ခါတလဲလဲအခါ, "ကူးတို့အမည်ဖြင့်စတိုးနီးယားက" နောက်တဖန်ပြတ်တောက်ခဲ့သည်။
ရုတ်တရက်ကျွန်မလုံးဝအာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်အံ့အားသငျ့ထင်ခဲ့သည်: အက်စ်တိုးနီးယား? ကြောင်းကြီးတွေလှေစတိုးနီးယားဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုယူမယ်လို့ကိုခေါ်ခဲ့သည်မဟုတ်လော
ငါမှာအလွှာဝါးရပ်တန့်နှင့်ဇွန်းချထား၏။ တွေက dotted ဝက်အူချောင်းနှင့်အတူ Sandwich ကငါ့ကိုဖြစ်ပါစေ, ငါမယ့်အစားသတင်းစာပုံအတွက်ရှာဖွေနေ၏ရှေ့သို့ငုံ့။ သတင်းစာများနှင့် reklarnblad များထဲတွင်ငါသည်အလျင်အမြန်သင်္ဘော၏နာမကိုသိရန်ရရှိရန်ဘရိုရှာကိုမြော်လင့်။
ငါကတွေ့ရှိခဲ့မတိုင်မီဒါဟာတာရှည်မရဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲငါနောက်ကွယ်မှလှိုင်းတံပိုးမြှုတ်နှင့်အတူပင်လယ်ပေါ်မှာဂုဏ်ယူစွာခရီးထွက်သောဧရာမသင်္ဘောနှင့်အတူပုံကြည့်ဘူး။ ငါ့မျက်စိကြီးမားသောကူးတို့အပေါ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအနက်ရောင်စာလုံး၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ခဲ့သောသင်္ဘောရဲ့အမည်, များအတွက်စိတ်အားထက်သန်စွာရှာဖွေနေကြပါတယ်။ အမှန်ပင်တိုးနီးယားအမည်ရှိပုံ bar မှာသင်္ဘော။
ငါဘရိုရှာကိုလှပသောရုပ်ပုံမှာငေးကြည့်။ သတင်းတောင်ကြာကြာမကွားအသံ။ အက်စ်တိုးနီးယား: ယခုပငျငါ့စိတျထဲမှာတည်ရှိသောတစ်ခုတည်းသောအရာသင်္ဘော၏နာမတော်ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကျော်ပြန်ကျော်ဖတ်ပါနှင့်။ အဆိုပါအသေးစားဘောလ်တစ်တိုင်းပြည်ရဲ့မာနထောင်လွှား M / S ကိုစတိုးနီးယားအောက်ဆုံးမှနစ်မြုပ်ခဲ့သည်။ ကြှနျတေျာ့မိတျဆှေ Leif Svensson နှင့်သူ၏တစျခုလုံးကိုကုမ္ပဏီဖြစ်ကောင်းဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ခဲ့သည်။ ငါသည်လည်းပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြပေသည်။
အဲဒါကိုတကယ်လဲသေကြပြီတဲ့သူစတိုးနီးယားဖွစျကွောငျးကိုအကြှနျုပျအပျေါနေထွက်လာတဲ့အခါသင့်ရဲ့ဦးခေါင်း၌မေးခွန်းများကိုတက် toted ။ ကျွန်မမီးဖိုချောင်စားပွဲ၌ရှည်ခဏထိုင်ကင်ပိန်းနှင့်ယခုပုံဘောလ်တစ်ပင်လယ်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းယင်းပိုပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်လက်ကမ်းစာစောင်စတိုးနီးယား, ပတ်သက်. အနည်းငယ်သာ amateurish ကြော်ငြာလက်ကမ်းစာစောင်မှာငေးကြည့်။ ငါဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့၏ရုပ်ပုံကိုအတူတူထားရန်ကြိုးစားခဲ့စဉ်နီးပါးမဟုတ်သောနှင့်အနည်းငယ်မှုန်ဝါး, ငါသည်နှစ်ခုဘရိုရှာကိုမြင်တော်မူ၏။ ငါ၏အကြံအစည် Leif Svensson ထံသို့သွားလေ၏။ ရုတ်တရက်ငါသူ၏ဇနီးက Sara မခေါ်သင့်ကြောင်းငါ့ကိုနှိပ်ပါ။ သူမကတစ်ခါတစ်ရံတွင်ပြုသကဲ့သို့သူမသည်အဆိုပါခရီးစဉ်အပေါ်ဒီအချိန်သွားရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သူမသည်အခြားအခါသမယတွင်တူညီသောခရီးစဉ်ငါအပေါ်ရီဂါအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်အခြားအမှုအရာတို့တွင်အရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်သူမအိမ်မှာနေဖို့ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့အနီရောင်ပတ်ဖုန်းကိုကြီးပြင်းခြင်းနှင့် Jonkoping ဖို့ 036 အရေအတွက်ကိုခေါ်ဆို။
သူမပြန်ဖြေမတိုင်မီသာလျှင်အနည်းငယ်အချက်ပြမှုများပေါ်ပေါက်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းခေါ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအရာကိုနားထောငျလိုသူအများအပြားရှိသောကြောင့်ဖြစ်နိုင် Sara, ထိုနေ့ရက်သည်ဖုန်းကိုထိုင်စောင့်ကြည့်။ Leif များစွာသောအဆွေခင်ပွန်းနှင့်၎င်းတို့၏တာဝန်မှတဆင့်လည်းသင်တန်းကလူအများကြီးသိပါတယ်။ အကယ်စင်စစ်သူတို့၏ချစ်ရသူအကြောင်းပိုမိုသတင်းအချက်အလက်ရှာလိုသူကျောင်းသားအများအပြားမိသားစုများသည်လည်းရှိ၏။ Sara စတိုးနီးယားသင်္ဘောကို Leif ကြီးတပြင်လုံးကိုပါတီအပေါ်ဖွစျကွောငျးကိုအတည်ပြုပြောဆိုသည်။ ဒါကြောင့်သူမကျွန်မဘယ်တော့မှမေ့လိမ့်မယ်တဲ့ဝါကျ said:
"ဒါပေမယ့်ငါအများကြီးမျှော်လင့်ချက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး ... "
သူမသည်ထို့ကြောင့် Leif အခြေအနေကောမမျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ ထိုမင်းသည်မဟုတ်ပြုလေ၏။ သူနှင့်အခြားသင်းအုပ်ဆရာ, Lennart Carlsson, သမ္မာကျမ်းစာလူတန်းစားအတော်များများနှင့်အတူပါတီ၏ကျန်ကို၎င်း, စတိုးနီးယားတဆယ်မိနစ်နစ်မြုပ်သည့်အခါအခြားသူများကိုရာပေါင်းများစွာပင်လယ်နက်နဲသောပင်လယ်၌ညဥ့်ဦးသေဆုံးခဲ့သည်။
ငါကပိုတစ်ကြိမ်ထက်ဒီဖြစ်ရပ်စဉ်းစားပါပြီ။ ငါဘုတ်အဖွဲ့တိုးနီးယားအပေါ်ပါပြီနိုင်ဘူး။ အဲဒီအစားစတိုးနီးယားဖို့ခရီးစဉ်အပေါ်တစ်လျှောက်တွင်အောက်ပါတို့, ငါက "ခံစား" မပြုကြသောကြောင့်, အိမ်မှာနေရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
မာရီအမည်ရှိသောလမ်းဖြင့် Linkoping ထံမှထိုမိန်းမသည်, ဣသရေလအမျိုးအားထက်တိုးနီးယားမှခရီးသွားအချို့အကြောင်းပြချက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် - သူမကအစပိုင်းတွင် Leif Svensson ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်ကို join ဖို့ဆုံးဖြတ်ပေမယ့်။
ဘယ်အချိန်မှာငါအကြာတွင်ငါသည်ဘုရားသခင်၏သူမ၏ဦးဆောင်ငါ့ကိုခဲ့ ပို. ပင်ဘယ်လောက်ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သဘောပေါက်ကြောင်းသိရှိခဲ့၏။
စာအုပ်အနေဖြင့် Semnos ကြေညာသူကထုတ်ဝေတဲ့ Christer Åberg၏အရှည်ဆုံးညဥ့် ။ အခန်းကြီး 2: စတိုးနီးယားနှင့်အတူခရီး။ စာမျက်နှာများ 25-36 ။